बुढानिलकण्ठ मन्दिरमा अहिलेसम्म कुनै राजाले प्रवेश गर्ने हिम्मत किन गरेनन् ? यस्तो छ पत्याउनै नसकिने कारण !! – PathivaraOnline
Home > समाचार > बुढानिलकण्ठ मन्दिरमा अहिलेसम्म कुनै राजाले प्रवेश गर्ने हिम्मत किन गरेनन् ? यस्तो छ पत्याउनै नसकिने कारण !!
बुढानिलकण्ठ मन्दिरमा कुनै राजाले प्रवेश गर्ने हिम्मत गरेनन् बुढानिलकण्ठ मन्दिरमा अहिलेसम्म कुनै राजाले प्रवेश गर्ने हिम्मत गरेका छैन्न । यसको भने पौराणिक कथा नै रहेको छ ।
अ श्लि ल भिडियो बनाउने नियतले ड्रेसिगं रुममा जोडेको थियो हिडन क्यामेरा